Bokotra eo an-trano: Raha tsy mandeha izy dia manana Helpive Touch (II) | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay dia niresaka momba izany izahay ny fomba fanamoriana ny bokotra Antsika ny iDevice hanitsiana tsara kokoa ny asan'ity bokotra ity izay mampiavaka an'i Apple amin'ny fitaovany miaraka amin'ny iOS. Rehefa ampitahaintsika izy io, amin'ny teôria, ny bokotra dia tokony hifanaraka kokoa amin'ny fiasa izay ataony, izany hoe mifandrindra ny bokotra sy ny hetsika.
Androany aho hiresaka momba ny fiasa iray izay somary miafina ao anatin'ny iOS raha toa ka tsy mandeha ny bokotra Home ary mijanona eo amin'ny Springboard tsy misy bokotra Home izahay. Noho ny fahazoan'ny iOS fidirana, Apple dia mamela antsika hampiasa "application" izay ho hita eo amin'ny efijery mandrakariva ary ho toy ny bokotra Home: Touchive Touch
Araka ny efa nolazaiko anao, indray andro any ny bokotra afovoan-tanànanay an'ny iPad dia hijanona tsy hiasa na hivaky mivantana mihitsy aza ary noho izany dia manana fiasa ao amin'ny rafitra fiasa izay mamela antsika hanana bokotra an-trano eo amin'ny efijery lalandava (ao anaty sary mangarahara) toy izao:
Ho an'ity dia tsy maintsy manaraka dingana kely dia kely isika mandritra ny iPad, jereo:
Miditra amin'ny Fikirakira ny iPad izahay ary avy eo mankany amin'ny General
Misafidy ny fidirana amin'ny faritra izahay
Ao amin'ny Accessibility dia ananantsika ireo fiasa rehetra izay mahatonga ny iDevice hifanaraka kokoa amin'ireo olona manana fahasembanana mafy (ary amin'ity tranga ity dia manararaotra an'io asa io izahay ho an'ny bokotra Home). Izahay dia mitady Helpive Touch ary kitiho eo io.
Hodininay ny fiasa ary hiseho eo amin'ny efijery anay ilay kisary mangarahara.
Interface interface Touch
Raha te hifandray amin'ny bokotra Home eo amin'ny efijery dia tsy maintsy manery ny kisary mangarahara isika ary hahita ny fiasa rehetra:
Fihetsiketsehana: Ny olona manana fahasembanana (na tsia) dia afaka mamorona fihetsika hanamorana ny fiasan'ny iDevice.
Favorites: Hiseho amin'ity fizarana ity ny fihetsika tianao indrindra.
Fitaovana: Afaka mitantana fiasa anatiny avy eto isika toy ny fihodinana ny efijery, ny fampiatoana ny feo, ny fampitomboana ny ...
Home: Raha manindry isika dia hiasa toy ny Home Button.
Ahoana ny hevitrao ny amin'ny solony? Mahaliana anao ve izany? Tianao ve ny Apple manolotra ireo fiasa ireo amin'ny iOS?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Bokotra eo an-trano: Raha tsy mandeha izy dia manana assistive Touch (II) izahay
vixen dia hoy izy:
Mamaly an'i zorrasco
Mampalahelo fa ny manova ny bokotra eo aloha dia sarotra tokoa ary tsy maintsy esorinao tanteraka ny telefaona, raha misy pejy web natokana ho an'ity amin'ny vidiny mirary, dia nilahatra izy ireo satria farafaharatsiny 60% amintsika no mijaly. izany.
aiza no ahafahako misintona fanampiana fanampiana ho an'ny iphone 3g
iPhone Backup Viewer, avereno angona avy amin'ny backup
Apple dia nilaza fa misy Apple TVs manana olana amin'ny fifandraisana Wi-Fi